Suufka kalkaalinta caafimaad
Suufka kalkaalinta caafimaadku waxay leeyihiin anti-daadashada iyo hawlo kale; waxaa lagu siiyaa qaab nadiif ah oo hal mar loo isticmaalo. Badeecadu waxay ku habboon tahay qaabdhismeedka caafimaadka iyo meelaha guryaha loogu talagalay daryeelka caafimaadka suufka kalkaalinta caafimaadku wuxuu leeyahay astaamaha soo socda: 1. Ka samaysan dhar isku-darka polypropylene aan sun ahayn oo aan dun lahayn; 2. Nadiifinta xabagta 'Ethylene oxide', nadiif iyo nadaafad leh. Suufka kalkaalinta caafimaadka waxaa badanaa loo isticmaalaa dhismooyinka iyo guryaha. Hababka ugu muhiimsan ee loo isticmaalo waa: 1. Soo saar kalkaalinta caafimaad ...
Iodophor jeermis dilaha
Jeermiska iodophor wuxuu awood u leeyahay inuu baabi'iyo borotiinka protoplasmic ee bakteeriyada, wuxuuna leeyahay shaqooyin adag sida dilka bakteeriyada, dilida wasakhda iyo dilka kudka. Badeecadan waxaa loo isticmaali karaa in lagu nadiifiyo maqaarka iyo xuubka xabka, sidoo kale waxaa lagu daaweyn karaa gubashada, trichomonas vaginitis, fungal vaginitis, caabuqyada caaryada maqaarka, iwm. Badeecadan waxaa loo isticmaali karaa isbitaalada, guryaha iyo meelaha kale. 0.4-0.6% g / ml 500 ml iodophor jeermiska 60 mliodophor jeermiska Iodophor jeermiska i ...
Faashadda faashaddu waxay leedahay shaqooyinka nuugista dareeraha, hagaajinta iyo duubista, iwm. Waxaa lagu bixiyaa qaab aan nadiif ahayn oo la tuuri karo. Badeecadani waxay ku habboon tahay dhar dhajinta ama addimada si ay u bixiso xoog wax qabanaya, iwm, si ay door uga ciyaaraan faashadda iyo hagaajinta. Badeecadani waxay ku habboon tahay in loo isticmaalo hay'adaha caafimaadka, guryaha iyo meelaha kale. Faashadda faashaddu waxay ka kooban tahay faashad suuf nuugta ah, oo ka samaysan faashad nuugta caafimaad oo buuxisa shuruudaha YY0331-2006 si loo bixiyo ...
Isticmaalka caafimaadka la tuuri karo waxay leedahay howsha ka hortagga qoqobka boodhka ee madaxa ka soo qulqulaya, ka hortagga boodhka dibedda inuu galo lakabka timaha, iyo wixii la mid ah. Badeecadu waxay ku habboon tahay caafimaadka, nadaafadda cuntada, qalabka korontada, qolka nadiifka ah, dharka iyo warshadaha kale. Koofiyado caafimaad oo la tuuri karo Daboolka caafimaadka ee la tuuro Hal mar oo la isticmaalo koofiyado caafimaad 10 xirmo Koofiyado caafimaad oo la tuuri karo ayaa leh astaamaha soo socda: 1. oo ka sameysan dharka polypropylene aan sunta lahayn oo aan-tolmo lahayn iyo dib-u-dhiska ...
Jeermiska jeermiska dilaa wuxuu leeyahay shaqada dilka bakteeriyada cudurada ku dhaca mindhicirka iyo cocci suppurative, virus daciifa iyo wixii la mid ah. Badeecadani waxay ku habboon tahay jeermiska dusha guud ee shayga, dharka cad, maqaallada wasakhaysan ee cisbitaalka. 500 g 84 jeermiska hore 500 g 84 jeermiska dilaha 84 jeermiska wuxuu leeyahay astaamaha soo socda: 1. qaacido cusub oo aan lahayn fosfooraska ilaalinta deegaanka iyo caafimaadka; 2. ma nadiifin karto oo keliya, laakiin sidoo kale nadiif iyo sun-saarid. 84 ...
Caarada baastada ah ee cudbiga suufka ah ee caafimaadka ayaa leh hawsha nuugista biyaha; waxaa lagu bixiyaa qaab aan nadiif ahayn oo hal mar loo isticmaalo. Badeecadani waxay ku habboon tahay unugyada caafimaadka iyo caafimaadka iyo daryeelka guriga, marka la nadiifinayo oo jeermiska laga dilayo maqaarka iyo nabarrada, waxaa loo isticmaalaa in lagu isticmaalo daawo. Suufyada cudbiga ee cudurada caafimaadka cudbi 25 baakado cudbiyeedka cudurada 2000 baakadaha cudbiga cudurada cudurada waxay leeyihiin astaamaha soosocda: 1. Madaxa suufka ee cudbiga cudbiga wuxuu ka samaysan yahay ab caafimaad ...
Kubadaha suufka nuugaya waxay leeyihiin nuugista biyaha iyo shaqooyinka kale; waxaa lagu siiyaa qaab aan nadiif ahayn oo hal mar loo isticmaalo. Badeecadani waxay ku habboon tahay unugyada caafimaadka iyo caafimaadka iyo daryeelka guriga, marka la nadiifinayo oo jeermiska laga dilayo maqaarka iyo nabarrada, waxaa loo isticmaalaa in lagu isticmaalo daawo. Xidhmada suufka nuugta ah ee 50g ah ee kubbadaha cudbida ee nuugaya Suufka nuugista ah waxay leeyihiin astaamaha soo socda: 1. Suufka nuugaya wuxuu ka samaysan yahay cudbi suuf nuugaya oo u dhigma heerka YY / T 0330, kaas oo ...
Suufka jeermiska looga dilaaco, Maaskaro Maaskaro Waji Caafimaad ah, Suufka Caafimaadka, Maaskaro ka hortagga fayraska, Maaskarada Neefsashada, Suunka Kalkaalinta,